Barcelona Oo Barbaro Ku Soo Xidhatay La Liga Iyo Lionel Messi Oo Laba Gool Ka Dhaliyay Eibar Si Uu Markii Lixaad Ugu Guulaysto Pichichi Trophy - Gool24.Net
Barcelona ayaa barbaro 2-2 ah la gashay kooxda Eibar waxayna kooxda Valverde awoodi wayday in ay guul ku soo xidho xili ciyaareedkan. Lionel Messi ayaa laba gool ka dhaliyay kooxda Eibar si uu markii lixaad ugu guulaysto abaal marinta gool dhalinta La Liga.
Lionel Messi ayaa laba daqiiqo gudahood laba gool kaga dhaliyay Eibar oo gool kaga hor martay Barcelona balse kooxda martida loo ahaa ayaa markeeda ciyaarta ugu soo laabtay goolka barbaraha.
Kaydka: Jordi Calavera, Sergio Alvarez, Asier Riesgo, Pedro Leon, Pape Diop, Marc Cardona, Kike Garcia.
Kaydka: Carles Perez, Moussa Wague, Inaki Pena, Carles Alena, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Abel Ruiz.
Daqiiqadii 20 aad kooxda Eibar ayaa gool kaga hor martay Barcelona kadib markii uu Marc Cucurella u saxiixay goolka furitaanka kaas oo uu caawintiisa sameeyay Sergi Enrich waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Eibar hogaanka kula wareegtay.
Barcelona ayaa ku qasbanaatay in ay Eibar ka barido barbaraha waxayna bilaabeen in ay raadiyaan qaabkii ay ciyaarta ugu soo laaban lahayaeen.
Daqiiqadii 31 aad Lionel Messi ayaa Barcelona xaalada adag ee ay ku jirtay ka saaray kadib markii uu dhaliyay goolka barbaraha isaga oo kubbad caawin ka helay Arturo Vidal waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
Daqiiqadii 32 aad Lione Messi ayaa laba daqiiqo gudahood si layaableh ciyaarta dhinaca kale ugu dhigay Eibar wuxuuna markan dhaliyay goolka labaad ee Barcelona ay markeeda hogaanka ku qabtay waxaana caawinta goolkan labaad yeeshay Rakitić.
SIDOO KALE AKHRISO: Arsenal Oo Sharuudo Cusub Oo Lacag U Badbaadineysa Ku Dareysa Heshiiska Qandaraas Kordhinta Ee Aubameyang Iyo Lacazette
Iyada oo daqiiqadii 30 aad ay Eibar hogaanka ciyaarta 1-0 ku haysay ayay daqadii 32 aad is aragtay iyada oo 2-1 hogaanka looga hayo wuxuuna Messi si deg deg ah ku dhaliyay goolashiisii 35 iyo 36 aad ee horyaalka La Liga.
Daqiiqadii 45 aad kooxda Eibar ayaa si layaableh barbaraha u keensatay isla daqadihii ugu danbeeyay ee qaybtii hore waxaana goolkan u saxiixay P. De Blasis kaas oo ciyaarta qaybtii hore ku soo xidhay barbaro 2-2 ah.
Haddii qaybtii hore ee ciyaarta afar gool layska dhaliyay waxay qaybtii labaad ee ciyartu noqotay mid gool la’aan ah oo ayna labada kooxood awoodin in ay wax goolal ah kala dhaliyaan.
Inkasta oo ay Barcelona heshay fursado ay ciyaarta ugu guulaysan karta gaar ahaan Pique, haddana qaybtii labaad waxay noqotay mid laysku daalay oo aan wax goolal ah lakala dhalin.
Valverde ayaa ciyaarta qaybtii labaad badal ku soo galiyayCarles Aleñà, M. Wagué iyo Carles Pérez wuxuuna ciyaarta ka saaray Malcom, Nélson Semedo iyo Sergio Busquets.
Lionel Messi ayaa seegay fursada uu saddexley goolal ah ugu soo xidhan karayay xili ciyaareedkan La Liga laakiin waxa uu hadaba ka sii fogaaday Mbappe oo ah xidiga kaliya ee kulamada baaqiga u ah ku doonaya in uu Messi kula tartamo kabta dahabka ah ee Yurub.
Laakiin Lionel Messi ayaa si rasmi ah ugu guulaystay abaal marinta gool dhalinta La liga ee Pichichi oo uu 36 gool ku qaaday waana xili ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah ee uu ku guulaystay halka kabta dahabka ah uu wali sugi doono waxa uu Mbappe samayn karo labada kulan ee u hadhsan.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro 2-2 ah oo ay Barcelona ku soo xidhatay xili ciyaareedka horyaalka La liga ee ay koobkiisa xili horeba ku soo guulaysatay.